Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Lund ee doorka Haweenka dhinaca Nabadda iyo Horumarka Geeska Afrika ayaa la soo gebagebeeyay
Shirkii Lund ee doorka Haweenka dhinaca Nabadda iyo Horumarka Geeska Afrika ayaa la soo gebagebeeyay
Shirkan oo ay ka qeybgaleen ergooyin badan oo ka kala ytimid dalalka Soomaaliya, Jabuuti, Ogadeniya, Eritrea, Kenya iyo Koofurta Suudaan ayaa la soo gebagebeeyay, iyadoo ay ka soo baxday go’aano muhiim ah oo ah in la isku waafaqay in doorka Dumarka ee dhinaca nabadda iyo horumarka uu yahay mid lagama maarmaan ah, ayna tahay in la ixtiraamo xuquuqda haweenka dhinac walba.
Shirka oo socday labo maalmood ayaa waxay ka qeyb-galayaasha yeesheen doodo gooni gooni ah, kuwaasoo dhammaantood la xidhiidhay dhibaatooyinka haweenka soo gaara, doorarka ay ku leeyihiin xal u helida mushkiladaha ka jira Geeska Afrika.
Marwo Ruqiya Xusseen Aabi oo ku hadlaysa codka haweenka Soomaalida Ogadenia ayaa khudbad xogwaran ah oo si cilmiyaysan loo soo diyaaryay ka soo jeedisay shirkii maanta halkaas oo ay ku soo bandhigtay gobood-falka ay ciidamada Itoobiya u gaystaan haweenka Somaalida Ogadenia.
Waxaa kale oo iyaguna doodihii ka socday madasha shirka su’aalo iyo xog warano yar yar oo goos goos ah ka soo jeediyay xubnihii ka socday Somalida Ogadeniya taasoo si wayn u saamaysay qaabka uu shirku u socday.
Waxaa kale oo bar bar socday shirkan kulan hoosaad goobta shirka ka dhacayay oo ergada ka socotay Somalida Ogadenya ay kula kulmeen madax kala duwan oo samayn wayn kuleh siyaasda Geeska Africa, wadamda reer Galbeedka, aqoonyahano ku xeel dheer arrimha Africa & wufuud ka socday haya’daha xaquuqad aadamaha u dooda.
Shirkan ayaa waxa laga soo jeediyay talooyin loo soo gudbiyay bulshada caalamka (International community), waxaana ka mid ahaa talooyinkaa;
1. In lala xisaabtamo isla markaana maxkamad la hor keeno cid kasta oo danbi ka gasha ummad jirta sida shacbiga Ogadeniya..
2. In ay international community-ga isha ku hayaan macaawamooyinka la siiyo kaligood taliyaasha in ay u isticmaalaan sidii loogu talo galay.
Guud ahaan waftigii matalayay Somalida Ogadeniya oo halkaas ka soo jeediyay qudbad dareenka kasoo qaybgalayaas soo jiidatay, ayaa waxay u arkayeen in uu shirkani ahaa mid ku soo beegmay xilgii ku haboonaa.